एमएएफ प्रयोगशाला स्पटलाइट: श्रुति देव
Ramya Gopal मा फ्रेवुअरी 13, 2019 द्वारा लिखित।
श्रुति देवलाई भेट्नुहोस्, एमएएफको पहिलो प्राविधिक परियोजना प्रबन्धक एमएएफ ल्याबमा। श्रुति स्वास्थ्य सेवामा विकासकर्ता र व्यापार प्रणाली विश्लेषकको रूपमा पृष्ठभूमि भएको नाफामुखी क्षेत्रबाट एमएएफमा आईन्।
जब श्रुति अन्य अवसरहरूमा सरेकी छ, हामीले उनलाई उनको म्याफमा भएको समयबारे सोच्न लगायौं।
MAF: तपाइँ कसरी एक टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रबन्धक को रूप मा आफ्नो भूमिका वर्णन गर्नुहुन्छ?
SD: म हाम्रा सबै प्रोजेक्टहरू अन्तिम मुद्दाहरूको लागि अन्तिम लाइनमा लैजानको लागि जिम्मेवार छ र साथै प्रोजेक्ट रिलीज पछि पनि कायम गर्दछ। म आवश्यक कागजातहरू, स्कोप प्रोजेक्टहरू, सबै सुविधाहरूको परीक्षण गर्न र नयाँ कार्यक्षेत्रहरू र मुद्दाहरूको समाधानका लागि समाधानहरूको साथ आउँछ। हामी हाम्रा अफशोर विकासकर्ताहरू र आन्तरिक टीमहरूसँग दैनिक रूपमा सहयोग गर्दछौं जुन हामी काम गरिरहेका प्रोजेक्टहरूमा अवरोधहरू हटाउन।
म सबै नयाँ टेक्नोलोजीमा डबल पनि गर्छु जुन एमएएफ़ले प्रयोग गर्ने निश्चित गर्न हामीसँग केही विशेषज्ञहरू छन् कि ती मुद्दाहरू समाधान गर्न को लागी पुग्ने भन्ने ज्ञानको समाधान गर्न। गैर प्राविधिक स्टाफ र यसको विपरित समन्वय प्राविधिक समस्याहरू पनि कामको प्रमुख हिस्सा हुन्।
एमएएफ: तपाईको उपलब्धिमा के म MAF मा सबैभन्दा गर्व छ?
SD: त्यहाँ धेरै छन्! मैले गर्ने प्रत्येक परियोजना मेरो लागि उपलब्धि जस्तो देखिन्छ किनकि जे भयो सबै जे जति एमएएफ हुन्छ नयाँ हो र मैले व्यक्तिगत रूपमा पहिले गरेको छैन। तर गर्वपूर्ण उपलब्धि भनेको स्पेसडेस्क (एमएएफको आन्तरिक मद्दत डेस्क) स्थापना गर्नुपर्नेछ जसले सबै स्टाफलाई उनीहरूको मुद्दा उठाउन मद्दत गरिरहेको छ र उनीहरूलाई समयमै समाधान गर्न एमएएफ ल्याबलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। म संगठनलाई सेल्सफोर्स लाइटनिंगमा संक्रमण गर्नाले गर्व पनि गर्दछु (किनकि मैले अधिक प्रायः व्यक्तिहरू प्रयोग गरिरहेको देख्छु) र ट्भिलियो मार्फत एसएमएस सेटअप गर्दा।
तर कुनै पनि सूची उल्लेख नगरी अपूर्ण हुनेछ MyMAF, जुन अब धेरैको हातमा छ। त्यो पक्कै पनि व्यक्तिगत भन्दा टिम प्रयास हो, तर म यसलाई आफ्नो कार्यकालको अवधिमा उपलब्धिमा थप गर्न चाहन्छु।
एमएएफ: तपाईंले आफ्नो समयबाट एमएएफमा काम गरेको कुराबाट के सिक्नुभयो
SD: मैले मानव जडानको बारेमा एमएएफमा धेरै कुरा सिकेको छु र प्रविधि कसरी राम्रोको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले मेरो सहकर्मीहरूबाट, नयाँ प्रणालीहरू जुन हामी प्रयोग गर्छौं, र हाम्रा ग्राहकहरूबाट सिक्यौं। ग्राहकका कथाहरूले सँधै मलाई प्रेरित गरे। प्रत्येक दिन त्यहाँ केही नयाँ टेक्नोलोजी छ जुन हामी सामना गरिरहेका छौं र मैले अप अप र टेक्नोलोजीको बारेमा धेरै सिकें जुन मैले पहिले कहिलै सुनेको छैन। मैले सिकें कि सफलताको लागि त्यहाँ कुनै लिखित फार्मूला छैन तर तपाईले कडा मेहनत गर्नुपर्दछ र मिसनमा रहनु पर्छ र सफल हुनको लागि तपाईंको ग्राहकहरूको बारेमा सोच्नुहोस्।
मैले यो पनि सिकें कि खुला र विविध कार्यस्थल सिर्जना गर्न यो सम्भव छ। एमएएफ यति विविध छ र खुला पृष्ठभूमिमा फरक पृष्ठभूमि र संस्कृतिबाट फरक व्यक्ति स्वीकार गर्दछ। यदि तपाईं कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ भने तपाईंले सबै रमाईलो गर्नुहुन्न, तपाईं अझै आनन्दित घण्टा र स्टाफ पछि हट्न सक्नुहुनेछ र तपाईंसँग भएका सबै सफलताहरूको आनन्द लिन एक स्वास लिनुहोस्।
हरेक दिन एमएएफ मेरो लागि एक साँचो शिक्षाको अनुभव थियो।
एमएएफमा सम्मिलित हुन इच्छुक हुनुहुन्छ? हाम्रो अर्को हुनको लागि अब आवेदन दिनुहोस् प्राविधिक उत्पाद प्रबन्धक.